Inotevera MacBook Air, mune akasiyana mavara senge nyowani iMac | Ndinobva mac
Manuel Alonso | 08/05/2021 11:00 | Rumo
Kana iwe waifarira mavara eMac nyowani, wadii kuiwedzeredza kune mamwe mamodheru? Ndozvinofanira kunge zvakafungwa naJohn Prosser, uyo akashinga kutaura kuti inotevera MacBook Air inotangwa neApple pamusika, vachauya nemavara akasiyana siyana. Nenzira iyi isu tichava tatova nesarudzo yekugona kuve mufashoni. Kubva kuApple Tarisa kune iMac yedu, kuburikidza neiyo iPhone. Ruvara rwakafanana.
Jon Prosser, muongorori weApple uyo anowanzoita fungidziro zvichibva kune asingazivikanwe masosi, akadonhedza bhomba pane yake YouTube chiteshi iyo Apple yakagadzirira ramangwana nyowani mhando MacBook Air ine itsva M2 chip uye mune akasiyana mavara. Zvese izvi zvinoenderana nenyaya yekuti sosi yakakuudza kuti vatoona akati wandei bhuruu MacBook Mhepo uye izvo zvinotungamira kufunga kuti pachave nemamwe mavara. Mumufananidzo uye akafanana neiyo nyowani 24-inch iMac yakaratidzwa muna Kubvumbi 20.
Makuhwa pamusoro pekuvandudzwa kweMacBook Air, mashoma kusvika parizvino, asi iwo aripo akavakirwa pachokwadi chekuti mharidzo yacho yaisazoitika kusvika hafu yechipiri yeiyi 2021. Saka zvirinani vanozvisimbisa kubva kuBloomberg (Maka Gurman) kana kunyangwe Ming-Chi Kuo uyo anosimbisa kuti kunyangwe aya mamodheru matsva anouya aine miniLED skrini.
Semazuva ese patinotaura nezverunyerekupe uye kwete kunyatsoita seiyi, yatisingapihwe mamwe ma data kana mazuva, isu tinofanirwa kumirira mazuva ngaafambe uye ngatione kuti makuhwa aya anosimbiswa sei kana kusanganiswa sei. Haisi yemusango mukana. Muchokwadi ndinofunga zano rekuburitsa color iMac raive rakanyanya kutorwa uye ipapo isu tinaro. Kana izvi zvikagamuchirwa zvakanaka (sezvazvinoratidzika kuti ndizvo), tichava nemalaptop ane mavara, tisingazeze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Inotevera MacBook Air, mune akasiyana mavara senge iMac nyowani
Mushandisi anogadzira "kadhi" mhando AirTag kuti ichengetwe muchikwama